Ubukela ku-Emtee umrepha waseMbali | News24
LAST UPDATED: 2018-03-25, 00:00
Ubukela ku-Emtee umrepha waseMbali
PHOTO: supplied ULuthando ‘Young M’ Mchunu
UZIBONA efinyelele ezingeni lika-Emtee umrepha osemncane waseMbali osanda kushutha imusic video yakhe ekulindeleke ukuba iphume maduzane.
ULuthando Mchunu (19), waseUnit 14 odume ngelika ‘YoungM’ uthi ungene endimeni yezomculo ngonyaka ka 2013 efakwa umalume wakhe. “Umalume wami odume ngelika MC Killer uyena okhulise uthanda lomculo we-Hip Hop kumina. Uthando lomculo luqale ukukhula uma ngibona ukuthi umculo ungisiza ukuthi ngikhohlwe izinto eziningi engibhekana nazo.”
UYoung M uthe uphothule ibanga lakhe leshumi Esiqongweni Secondary ngonyaka owedlule kwathi kulonyaka wakhetha ukugxila ekufukuleni umculo wakhe. “Kulonyaka ngikhethe ukugxila emculweni wami nasekuzimaketheni njengeciko. Akulula ukungena endimeni yezomculo njengeciko elizimele ngoba ubhekana nezingqinamba eziningi ikakhulukazi kwezezimali ngoba yonke into yenziwa imali.”
I-video yengoma kaYoung M ethi ‘PMB Rocks’ iqede ukushuthwa ngenyanga edlule kanti kulindeleke ukuba iphume maduzane. Lengoma iphuma kwi-mixtape yakhe ethi ‘The Start of YM’.
“Lengoma ikwi-Mixtape yami nayo ezophuma maduzane. Kumanje ngimatasa ngizama ukubhalisa izingoma ezikuyona kwa-Samro kanti bathe emuva kwezinyanga ezintathu konke kuyobe sekulungile,” kusho lomculi.
Phakathi kwabaculi athe ubukela kubo, uYoung M ubalule u-Emtee wodumo lwengoma ethi ‘Roll Up’ kanye no Nasty C odume ngengoma ethi ‘Juice Back’. “Ngibathanda kakhulu, uma ngiziqhathanisa nabo sinesitayele esicishe sifane sokurepha kanti futhi nabo bacula ngezinto ezinomyalezo kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngithole ithuba lokusebenzisana nabo,”kusho yena.
UYoung M uthe umculo wakhe uzotholakala ku www.bozza.mobi/luthaym kanti abathanda ukwazi kabanzi ngaye nomculo wakhe bangamthola ezinkundleni zokuxhumana. KuFacebook ungu YM-SA1 kuTwitter noInstagram uYM_SA1.